Shirwayne Siyaasiyiinta Bariga Sanaag Deeganka Caroweyn Ee Duleedka Magalada Badhan Uuga Socda | Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey	Maanta oo ah
Shirwayne Siyaasiyiinta Bariga Sanaag Deeganka Caroweyn Ee Duleedka Magalada Badhan Uuga Socda
Badhan Sept. 25, 2012– Deeganka Caroweyn oo katirsan Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag, ayaa maalintii labaad ka socda shirwayne ay ku qabsatay beelaha Aaden Siciid (Warsangali) kaas oo la sheegay, in lagaga wada arinsanayo mustaqbalka siyaasadeed ee Beelahaasi Gobolka dega.
Shirkan oo furmay 23-kii September, waxa ka qayb-galay, Madax-dhaqameedyo, Odayaal, Culim-u-diin, Wax-garadka iyo Siyaasiyiin beelahaas oo ku kala gedisan mabda’a iyo qadiyada Somalidiidku ku doonaan Madax-banaanida . Waxaana shirkaasi ka qeyb galey Siyaasiyiin xilal ka soo qabtay Maamul Goboleedka Puntland.ee waqtigiisu sii dhamaanayo Siyaasiyin-taas oo wakhtigan lagu jiro Mucaarad ku ah hogaamiyaha garoowe Faroole. Isla-markaana ka soo hor-jeeda siyaasadda xisbiyada badan ee u watto Faroole rabo na inuu ka hirgeliyo Deeganka Sanaag Bari.
Shirkani maalintiisii labaad bu galay, ilaa hadda waxa la sheegey, arimaha laga wada hadlayo wexey yihiin, arimo la xiriira mustaqbalka siyaasadeed ee Bulshadaas. Siday nabad ula noolaan lahaayen beelaha la deriska ah iyo beeshu uga hortegi laheyd maamulka garoowe si aanu deegaankooda uga qeyb gelin ololaha la xidhiidha hanaanka xisbiyadda badan ee garoowe la guurayso. Iyadoo la sheegay inuu shirkaasi u horseediyo Suldaanka oo hadda ku sugan Deegaanka Bariga Sanaag.
Shirkan ayaa la sheegay, inay hoosta kala socdaan oo u dhan yihiin Siyaasiyiinta reer Sanaag kaga jira maamulka siilaanyo . Isla-markaana u olooleyniya iney ka soo baxaan go’aamo taageersan Siyaasiyiinta Bariga Sanaag ee mamulka siilaanyo taagersan. Iyadoo looga dan leeyahay, in Siyaasiyiinta siilaanyo katirsani doonayaan inay iska maydhaan fadeexado ka soo gaadhay khilaaf ka dhashay maal-gashigii dekeda Laasqoray oo xukuumaddu faro-galin ku samaysay
Short URL: http://allssc.com/?p=42056
Posted by mukhtaar muuse on Sep 26 2012. Filed under Wararka.